Maitiro ekuti utorezve mazita mafaera kamwechete muLinux Linux Vakapindwa muropa
Kudzoreredza faira kana dhairekitori kuri nyore, zvese kubva kumagumo uye kubva kune yakajeka nharaunda. Izvo zvinogona kuitwa nenzira dzinoverengeka, senge nemv murairo kana necp. Nekudaro, dzimwe nguva zvinofanirwa kutumidza mafaira akati wandei panguva imwe chete, uye kuzviita rimwe nerimwe kungave kunetsa kukuru, kunyanya kana paine akawanda.
Muchidzidzo ichi iwe uchaona mamwe marudzi esimba rename mafaera mune imwe chete muLinux nenzira yakapusa ...
Maitiro ekudzoreredza mafaera mune imwe kuenda muLinux
Kune akatiwandei emhando dzesimba rename akawanda mafaera imwe-nguva paLinux. Heano dzimwe nzira dzakanakisa dzayo.
Shandisa bhuku (murume) kuti uwane rumwe ruzivo nezve iyi mirairo. Ini ndichangoisa muenzaniso wekushandisa nyore. Asi vane zvimwe zvakawanda sarudzo ...
mmv: ndiwo murairo unogona kufamba, kuteedzera uye kutumidzazve mafaera. Inowanikwa muDebian uye imwe nzvimbo yekubva, saka unogona kuiisa nyore. Kuti uishandise, fungidzira kuti une file1.txt, file2.txt uye file3.txt uye iwe unoda kuti vanzi a1.txt, a2.txt uye a3.txt, zvakanaka, iwe unongofanira kuenda kudhairekitori uko iwo mafaera ari uye anoita odha iyi:
Rename: chimwe chinhu chinokwanisa kukwanisa kushandura zita remafaira. Inogona kuiswa nyore nyore kubva pazororo uye kana yaiswa, kushandiswa kwayo kuri nyore. Semuenzaniso, ngatiti iwe une abc1.txt, abc2.txt, uye abc3.txt uye iwe unoda kuzvipa mazita kuti xyz1.txt, xyz2.txt, uye xyz3.txt. Iwe unongofanirwa kuenda kudhairekitori uko iwe uine iwo mafaera uye woitisa:
renameutils: inzvimbo yezvirongwa zvekutumidza mazita mafaira uye madhairekitori nekukurumidza uye nyore. Inobatanidza qmv kufamba, qcp kuteedzera, imv kufamba mukati, icp kuteedzera zviri mukati, uye deurlname kubvisa ma URL. Kudzokera kumimwe mienzaniso yapfuura, fungidzira kuti unayo mumuedzo / dhairekitori, mune izvo, kuti uvape mazita iwe unofanirwa kuita unotevera kuraira, uye izvo zvinozovhura mhariri yemavara kuti iwe ugone kutumidza zita zvakanaka (kuruboshwe column ndiwo mazita azvino uye mukoramu kurudyi iwe unogona kunyora zita raunoda kupa rimwe nerimwe):
vimv: yakavakirwa paVim zvinyorwa edhita uye inoshanda nenzira yakafanana kune yapfuura, ichikwanisa kushandura mazita kubva mupepeti Ndokunge, mazita emafaira ari mudhairekitori anozonyorwa mumitsetse yeiyo faira faira kuitira kuti iwe ugone kuagadzirisa, kana uchinge waagadzirisa ese sezvaunoda, kana iwe uchichengetedza iwo anozoshandurwa Kubata mupepeti, zvinoitwa zvakafanana neakakurumbira zvinyorwa edhita ... Uye nenzira, kana iwe uri wakanyanya kumaEmac, zvinogona kuitwawo nazvo.
thunar: uyu maneja wefaira ari munzvimbo dzinoverengeka. Kana iwe ukaiisa, kubva pairi iwe unogona zvakare kukurumidza kutumidza akawanda mafaera panguva imwe chete. Inoshanda yakafanana neyemupepeti nzira, ndiko kuti, iwe unogona kuona Zita rechikamu nemazita azvino uye rimwe Zita Nyowani rine mazita matsva iwe aunoda kuisa, uye kuti ugone kutumidza mazita mumabatch. Pakupedzisira, tinya bhatani renama mafaira uye ndizvozvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro ekuti utorezve mazita mafaera kamwechete muLinux